Puntland | Mustaqbal Radio
Home - Puntland
Tabarkaan ayaa maanta loo furay Saraakiil iyo Saraakiil Xigeeno waxaana ka qeyb galay furitaanka Xubno ka kala socday Dowladda Federaalka, Maamulka Puntalnd iyo Beesha Caalamka. Wasiirka Waxbarashada, Hidaha iyo Tacliinta sare iyo Wasiirka Cadaaladda Puntland oo ka qeyb galay tababarka ayaa sheegay in u jeedka laga leeyahay uu yahay in Ciidamada la siiyo Aqoon dheeraad ah, waxna laga baro habka ...
Gaas oo u dhoofay Imaaraadka
Madaxweynaha Maamulka Puntland C/Wali Maxamed Cali Gaas iyo Wafddi uu hoggaaminayo ayaa maanta u dhoofay dalka Imaaraadka Carabta. Gaas ayaa safar qaadan doona afar cisho, wuxuu ku joogi doonaa Magaalada Abu Dubai ee dalka Isu taga Imaaraadka Carabta, halkaasi oo uu kula kulmi doono madaxda dalkaasi. C/wali Gaas oo Suxufiyiinta kula hadlay Magaalada Boosaaso ee Gobolka Bari, ayaa wuxuu sheegay ...
Gaas oo magacaabay Taliye ku xigeenka Daraawiishta Puntland
Maadxweynaha Maamulka Puntland C/Wali Maxamed Cali Gaas ayaa magacaabay Taliye ku xigeenka Ciidamada Daraawiishta Maamulka Puntland. Xilkan waxaa loo magacaabay Siciid Axmed Maxamed (Shoodhe),waxaana lagu beddelay Dayr Xaaji Cabdi oo xilkan horay isaga casilay. Wareegto ka soo baxday Xafiiska Madaxweynaha Puntland C/Wali Maxamed Cali Gaas ayaa lagu magacaabay Siciid oo horay uga tirsanaa Ciidanka Qeybta 54aad .
Gaas: “Lacagta lagu qabtay Muqdisho,qeybteenna Safiirka Imaaraadka ayaan kala hadlay”
Madaxwweynaha Maamulka Puntland C/Wali Maxamed Cali Gaas ayaa markii ugu horresay ka hadlay lacagta lagu qabtay Magaalada Muqdisho ee ay wadday diyaarad laga leeyahay Dalka Imaaraadka. Gaas,waxaa uu sheegay in lacagtaas ay Puntland ku leedahay $3.6 Milyan oo doollarka Mareykanka ah islamarkaana uu arrintaas kala hadlay danjiraha Imaaraadka ee Soomaaliya. Sidoo kale wuxuu sheegay Madaxweynaha Puntland in arrinta ay si ...
Madaxweynaha Maamulka Puntland C/Wali Maxamed Cali Gaas oo shir jaraa’id ku qabtay saldhigga Ciidanka Badda Puntland ayaa sheegay in aysan jirin dowlad ama cid kale oo u buuxin karta kaalinta ay Imaaraadka ugu jirto. Waxaa uu beeniyay in Puntland ay xiriirka ku jartay Imaaraadka isaga oo sheegay in IMaaraadka ay kaalin weyn ka qaateen tababarka Ciidanka Puntland sidoo kalena ay ...
Imaaraatka Carabta oo Joojiyay Tababarkii uu siinay Ciidamada Soomaalida.
War kasoo baxay Dowladda Isu tagga Imaaraatka Carabta ayaa lagu sheegay in ay joojiyeen Kaalmadii iyo Tababarkii Ciidan ay siinayeen Soomaaliya tan iyo 2014-kii. Imaaraatka ayaa sheegay in Xiriirka kala dhaxeeyo Soomaaliya uu sii xumaanayay Mudooyinkaan, iyagoona ugu dambeyn go’aankaan Qaatay. Intii Howshaan ay wadeen waxa ay sheegeen in ay Koofurta Soomaaliya ku tababareen 2407 Askari, sidoo kalana ay dhiseen ...
Tababarayaashii Imaaraadka oo ka dhoofay Boosaaso
Saraakiil Milatari oo u dhashay Imaaraadka iyo Boorsooyin ay wateen ayaa ka dhoofay Garoonka Diyaarada Magaalada Boosaaso kaddib is faham waa dhexmaray Puntland iyo Imaaraadka. Dowladda Imaaraadka ayaa maamulka Puntland ku amartay in ay iska diiddo go’aanka dowladda Federaalka ah ee Ciidamada ay tababartay Imaaraadka kula wareegeyso dowladda Federaalka ah,waxaana ay saraakiisha Imaaraadka la kulmeen mas’uuliyiinta Puntland kuwaas oo ka ...
Dil xalay ka dhacay Waqooyiga Gaalkacyo.
Wararka naga soo gaaraya Magaalada Gaalkacyo ee Xarunta Gobolka Mudug ayaa sheegaya in Kooxo hubeysan ay xalay dil ka geysteen Waqooyiga Gaalkacyo. Ninka la dilay oo lagu Magacaabi jiray Axmed Deeq Cali Hayaan, ayaa ahaa Xisaabiyihii Guud ee Dowladda Hoose Gaalkacyo, Waxaana dhowr xabadood qeybta sare ee Jirka kaga dhuftay dhalinyaro Bistoolado ku hubeysan, Kooxihii dilka geystay ayaa durbadiiba goobta isaga ...
Diyaarado duqeyn ka geystay Degmada Qandala ee Gobolka Bari
Duqeyn diyaaradeed ayaa laga soo wariyay in ay ka dhacday Degmada Qandala ee Gobolka Bari,halkaas oo ay fariisimo ku leeyihiin xubno ka tirsan Ururka Daacish. Duqeynta ayaa la sheegayaa in ay ka dhacday degaan hoostaga Degmada Qandala waxaana geystay diyaarad nooca aan duuliyaha lahayn ah. Saraakiil ka mid ah Ciidanka Puntland ayaa sheegay in duqeynta lala beegsaday Saldhig Ururka Daacish ...